Madaxweyne Xaaf oo ka dhoofay Garowe “Shirkii si aan fiicneyn ayuu ku dhamaaday” | Sagal Radio Services
Madaxweyne Xaaf oo ka dhoofay Garowe “Shirkii si aan fiicneyn ayuu ku dhamaaday”
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), ayaa maanta ka dhoofay magaalada Garoowe, kaddib markii natiijo la’aan uu ku soo dhamaaday shirkii u socday madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sida wararka sheegayaan madaxweyne Xaaf waxa uu u duulay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, iyadoo garoonka Diyaaradaha Garowe ay ku sii sagootiyeen Senator C/raxmaan Faroole iyo Senator C/risaaq Jurile.
Hadal kooban oo uu wariyayaasha ku siiyay magaalada Garoowe kahor inta uusan dhoofin waxa uu sheegay in si aan lagu farxin uu ku dhamaaday shirka mudada shanta maalin u socday madaxda Soomaalida, isagoo dowladda ku eedeeyay ineysan wax dabacsanaan ah ka sameyn shirka.
” waxaa soo gabagaboobmay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaasoo runtii ku dhamaaday si aan u fiicneyn dalka iyo dadka midna, laguna farxin laakiin Soomaali baa la yahaye waa la isu tagi doonaa, mindhaa waa la heshiin doonaa mar ay nooqtaba” ayuu yiri Xaaf.
Waxa uu hadalkiisa intaasi sii daba dhigay ” Nasiib darro dowladda federalka haba yaraatee wax garawsha ah oo wixii dhibaato jiray ooy kamid eheyd sharcigii doorashooyinka arintii Galmudug arintii kheyraadka midii golihii Iskaahsiga ee dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada wa aay diiday iney dowladda ka garowdo” ayuu sidoo kale sheegay madaxweynaha Galmudug.
Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ugu danbeyn dhaliilay habka loo sugo amniga magaalada Muqdisho, wuxuuna tilmaamay in shirka diirada sidoo kale lagu saaray maqaamka Muqdisho, maadaama dhowr Milyan oo qof ay yihiin kuwo xuquuq la’aan ah.